Sida loo soo celiyo sawirrada tirtiray - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>Sida loo soo celiyo sawirrada tirtiray
Sida loo soo celiyo sawirrada tirtiray
Sidee loo soo celiyaa sawirrada tirtiray? Sawirradu waa faylal caan ah oo aad muhiim u ah, maxaan sameeyaa haddii aan si shil ah u tirtiro faylalka sawirrada muhiimka ah? Maqaalka maanta, tifaftiraha ayaa ku soo bandhigaya laba hab oo fudud oo kaa caawinaya inaad si fudud ula soo baxdo sawirro si shil ah loogu tirtiray kumbuyuutarkaaga, kaarka SD, iyo taleefanka gacanta. Ku saabsan soo kabashada sawirrada tirtiray
Haddii ay tahay shaqada ama nolosha, sawirradu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan, waxay diiwaan geliyaan dhammaan noocyada muhimka noo ah Waqti. Kobcinta tikniyoolajiyada, sawir qaadista ayaa noqotay mid aad u fudud oo xiiso leh, sida sawirro la wadaagista ehelka iyo saaxiibbada, gelinta aagagga bulshada, iwm. Qof kasta wuxuu lahaan doonaa sawirro badan oo lagu keydiyay kombiyuutarka ama taleefanka gacantu, iyo adeegsadayaasha badanaa la tacaamulaya sawirrada waxaa laga yaabaa inay khibrad u leeyihiin tirtirka sawirrada si qalad ah. Xaaladdan oo kale, maxaan samaynaa? Jawaabtu dabcan waa si loo soo celiyo sawirrada. Sawirrada tirtirey miyaa laga soo kaban karaa? Haa! Hawlgalka tirtirka ayaa si fudud u calaamadinaya meesha diskiga la haystay inuu yahay "bilaash" oo gabi ahaanba ma tirtiri doono xogta. Sidan, booska diskiga ayaa la siidaayaa, oo meelaha bannaan ee nidaamka ku jira ayaa loo arki karaa inay sii weynaanayaan, iyo xog kale oo isticmaali kara booskan. Haddii aad sii wado keydinta xogta ka dib markii faylka la tirtiro, waxaa laga yaabaa inuu ku dhexjiro meel diskiga ah oo uu tirtiro xogta tirtirey. Si fudud u dhig, ka dib markii sawir si shil ah loo tirtiro illaa la qoro, sawirkii lumay dib ayaa loo soo kaban karaa! Haddii aad rabto inaad ka soo kabato sawirrada tirtiray, waa inaad si dhakhso leh u joojisaa dhammaan hawlgallada qoritaanka! Kadib raac tillaabooyinka hoose si aad uga soo kabato. Casharka 1-aad ee Soocelinta Sawirka Soocelinta Sawirka 1: Sidee dib loogu soo ceshan karaa sawirrada diskooga adag iyo kaadhka SD ee si qalad ah loo tirtiray? Xusuusi in kahor soo kabashada dhabta ah, marka hore waad hubin kartaa haddii ay jiraan faylal loo baahan yahay kombiyuutarka qashinka qashinka. Markaan ka tirtirno faylasha kaararka adag ee maxalliga ah, feylasha waxaa lagu gelin doonaa qashinka dib-u-warshadaynta. Haddii xogta laga soo ceshan karo qashinka dib loo warshadeeyo, markaa looma baahna hawlgallo dheeri ah. Dib ugu soo celi sawirrada tirtiray
Tallaabada 1: Ku xir taleefanka sawirrada lumay kombiyuutarka, ka dibna telefoonka ku xidha si aad u hesho rukhsad xidid. Tallaabada 2: Ku rakib oo ku socodsii kombiyuutarka xog soo kabashada kombiyuutarka kombiyuutarka, ka dibna xulo qalabka keydinta ee xogta lumay, oo guji batoonka "Next" si aad u bilowdo iskaanka. Dib u soo hel sawirrada tirtiray
Tallaabada 3: Dib u eegis oo keydso sawirrada. Kadib iskaanka, waxaad saadalin kartaa xogta ku jirta barnaamijka softiweerka si aad u go'aamiso bal in faylasha sawirrada aad u baahan tahay lagu soo celin karo si sax ah. Kadib markaad xaqiijiso inaysan jirin wax dhibaato ah oo ku saabsan natiijooyinka soo kabashada, waad iibsan kartaa oo aad iska diiwaangelin kartaa softiweerka, ka dibna koobi kartaa faylasha aad rabto inaad ka soo kabato kumbuyuutarka. Soo-kabashada sawirrada tirtirey
Su'aalaha Weydiimaha ee soo kabashada sawirka
1. Sidee dib loogu soo ceshan karaa sawirrada laga tirtiray Apple iPhone? Waxaa la tirtiray sawirrada taleefanka gacanka ee Apple, waxaad isku dayi kartaa inaad sawirrada ka soo celiso kaydinta marka hore; haddii aysan jirin gurmad, waxaad u adeegsan kartaa barnaamijyada soo kabashada xogta si aad ugu soo celiso:
Ku xir kombiyuutarka, ku rakib barnaamijka kumbuyuutarka soo kabashada xogta barnaamijka moobiilka ee "iOS" kombiyuutarka. Adeegso softiweerka soo-kabashada si aad taleefanka u masawiriso. Dib u eeg oo ka soo kabso sawirradii lumay. 2. Sawirkee soo kabashada sawirka ayaa wanaagsan? Waxaa xilligan jira suuqyo badan oo soo kabashada sawirrada ah, laakiin tayada softiweerku waa mid aan sinnayn, sidee loo xukumi karaa barnaamijkee soo kabashada ee wanaagsan? Si fudud u dhig, dooro alaabada xiddig ee caanka ah ee caanka ah, tikniyoolajiyada iyo tayada soo celinta alaabooyinkan ayaa la damaanad qaaday. Kadib waxaa jira tijaabada dhabta ah .. Adoo iskudayaya barnaamijyo kala duwan oo isbarbardhigaya saameynta soo kabashada, waxaad dooran kartaa midka kugu habboon. Tafaftiraha halkan wuxuu kugula talinayaa barnaamijyada soo kabashada xogta ee Bplandatarecovery, oo leh saameyn soo kabasho sarre oo ay fududahay in la shaqeeyo. 3. Sawirrada soo noqday lama furi karo kadib markii la daawado, maxaa socda? Sawirada dib loo helay lama furi karo sababaha suurta galka ah ayaa ah: sawirada waa la dhaawacay, tusaale ahaan, howl qabad qoris ayaa dhacda kadib markii xogtu lumaan, oo xogtii lumay; . Xaaladdan oo kale, fadlan la xiriir kooxda farsamada ee Bplandatarecovery waqti si aad uga caawiso falanqaynta sababta iyo samaynta xalka. Sidee loo soo kaban karaa faylasha sawir ee la tirtiray? Sida kor ku xusan waa habka ugu caansan ee loo adeegsado soo kabashada. Waxaan rajeynayaa in hababka kor ku xusan, inaad kugu caawin karto inaad soo ceshato sawirrada tirtiray, fiidiyowyada, maqalka, dukumiintiyada iyo xogta kale ee aaladaha kala duwan. Ugu dambeyntiina, tifaftiraha ayaa ku xasuusininaya in feylasha muhiimka ah ay tahay in dib loo soo celiyo waqtiga si looga fogaado dhibaatada luminta xog badan.
PreDib u soo hel sawirro si qalad ah looga tirtiray kaamirada SD kaarka
NextSi aan kala sooc lahayn loo tirtiray talaabooyinka soo kabashada